Posted by အိမ်မက်စေရာ at 4:47 AM6comments:
သံယောဇဉ်ရယ် ဖြတ်ချင်ပါတယ် ဆိုမှာ တရစ်ပြီး တရစ်တိုး တယ်။
အရင် သံယောဇဉ်အဟောင်းတွေ တောင် ဖြတ်လို့ မကုန်နိုင်သေးတာ သံယောဇဉ်အသစ် ကထပ်ပြီးတိုးတော့ ကိုယ့်ဒုက္ခ ကိုယ်ရှာသလိုပါပဲ လား အိမ်မက်စေရာ..။
အလုပ်က ပြန်ရောက်တဲ့ အချိန်တိုင်း လက်က အော်တို ကွန်ပြူတာ ဖွင့်ပြီးသား..ပြီးရင် B ဆိုတဲ့ စလုံးလေးနှိပ် ကိုယ်ပိုင်အိမ်ကလေးထဲ ဝင်..။
ဒီနေ့ ဘယ်သူတွေ လာလည်သွားလဲ ကြည့်။
comment လေးတွေ ဖတ်ပြီးပြုံး။ အော် အရူး တစ်မျိုးပဲလား မသိ..။
ချစ်သူ ခင်သူတွေကို မမြင်မိ ပြန်တော့ ရင်ထဲ မှာ အလိုလို ဝမ်းနည်း ..
လာတောင် မလည်ဘူးရယ်လို့ တွေးမိပြန်ရော။ အော် သံယောဇဉ် တဲ့.. ချည်မှန်းမသိ ချည်မိတဲ့ ကြိုးရယ်ပါ..။
အပျော်တမ်းသက်သက် ရင်ဖွင့်ချင်ရုံသက်သက် ရေးခဲ့တဲ့ ဒီဘလော့ဒ်ရယ်..
ခင်မင်ကြရုံသက်သက် comment ပေးကြရုံသက်သက် ရင်းနှီးခဲ့ကြတဲ့ ဒီဘလော်ဂါတွေရယ်..
ခုတော့ ကိုယ့်ကိုယ် ကို မသိလိုက် ခင်မှာပင် ကြိုးတွေ တထပ်ထပ်တိုး အိုး သံယောဇဉ်မျိုးတဲ့..။
မတွေ့ရင် မနေနိုင်သလို အိမ်ကလေးတွေ မရောက်ရင် လွမ်းသလို နဲ့ အားရင်အားသလို သူတို့စီပြေး စာကလေးတွေရေး ကိုယ်ရောက်ခဲ့ကြောင်းအသိပေးလို့....ပြီးတော့ အိမ်ပြန်..။
ကိုယ့်အိမ်ပြန်ရောက်တော့လဲ မနေသာ မထိုင်သာ တခုခု မှ မရေးရင် မနေနိုင် အော်ကွယ် ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ချရေးမယ် ခံစားချက်ခြင်းဖလှယ်တာပဲ ဘာဖြစ်သလဲကွယ်နော်...။
ဧည့်သည်တွေကို စာရင်းပြုစု အသစ်တွေရှိရင် လိုက်လည် အဟောင်းတွေကို ဝင်နှုတ်ဆက် နဲ့ ကိုယ့်အိမ်ကို သူတို့ မရောက်တာ ကြာတော့လဲ နေကောင်းသလား တွေးပူရပြန်ရော..။
တခါတလေတော့ သူတို့ များမေ့သွားပြီလားတွေး အထီးကျန်သလိုလေး နဲ့...
အဖော်ပျောက် မှာ ကြောက်တဲ့ ကလေးလို ..။
ဒုက္ခ အဲ့ဒါ သံယောဇဉ်တဲ့...
ကိုယ်တိုင် မသိလိုက်ခင် မှာ သူ့ဟာသူ တွယ်ငြိ ဖြေကြည့်ဖို့ ခက်တဲ့ ဒီသံယောဇဉ်ကြိုး..
ဘလော်ဂါတို့ရယ် မတွေ့တာ ကြာရင်..
ရှင်တို့ကို ကျွန်မ လွမ်းတယ်...။
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 11:45 AM 15 comments:
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 11:48 AM5comments:
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 9:18 AM3comments:
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 6:41 AM5comments:
စုံဆည်းဖို့ ကံကြမ္မာ မပါလာလဲ..
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 7:55 AM3comments:
မမ မဒမ်ကိုးနဲ့ သမီးစံ တို့ တက်ဂ်လာလို့ ရေးဖြစ်တဲ့ ပို့စ်လေးပါ..
စာရေးမလို့ လုပ်တုန်း မြန်မာနိုင်ငံ က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အွန်လိုင်းတက်လာ တာနဲ့ ငါးထောင်တန်ဖုန်းအကြောင်း စကားစပ်မိတော့ သူကပြောတယ်...
အဲ့ဒါ ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီလေ တဲ့ !!!!!!!!!
အိမ်မက်လဲ မျက်လုံးနဲနဲ ပြူးသွားတယ်.. တရားဝင်တော့ မဟုတ်သေးဘူး တဲ့ ဒါပေမယ့် ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ လို့ ပြောတယ်...အော် ကိုယ်က ခုမှ ရေးမလို့ ကြံတုန်း ရှိသေး ဖျက်သိမ်းပြီ ဆိုတဲ့ အသံက ထွက်နေပြီ ..စိတ်တော့ မကောင်း ဖြစ်သွားတယ် အားလုံးက တော်တော်လေး မျှော်လင့် နေကြတာလေ.. ဒီဖုန်းလေး ထွက်လာရင် လူတော်တော်များများ ကိုင်လာနိုင်မှာ ဆိုတော့ဆက်သွယ်ရေး တော်တော် အဆင်ပြေမယ့် ကိစ္စ လေ...အိမ်မက်လဲ ငါးထောင်တန်ဖုန်းဆိုတာ ဘယ်လိုဆိုတာ သေချာမသိသေးတော့...ပို့စ်မရေးခင်လေး လိုက်ရှာကြည့်မိတယ်...
အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ဒီငါးထောင်တန်ဆင်းကဒ်ကို အကောင်အထည် ဖော်မှာက ရွှေပြည်တံခွန် ကုမ္ပဏီကပါ..ရွှေပြည်တံခွန်ကုမ္ပဏီက ၂၀၁၁ သြဂုတ်လ ၂၅ မှာ ဖွဲ့တယ် လို့ ဆိုပါတယ်..၂၀၁၂ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့မှာ စီမံ စီးပွားက မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုတယ်..
ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့မှာ ဦးလွင်နိုင်ဦးက အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ.. ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်စုစုလွင် က ဒါရိုက်တာ..မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ဝင်းဝင်းကြည် ဒါရိုက်တာ ဆိုပြီး ဒါရိုက်တာ သုံးဦးနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်
ဒါက ရွှေပြည်တံခွန် ကုမ္ပဏီရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အကြောင်း...
သုံးမယ့်စနစ်က UMTS ( Universal Mobile Telecommunication System) ဒါလဲ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် သုံးစွဲ ပြီးသား ဖြစ်နေတဲ့ လိုင်းတစ်ခုပါ.. တိတိကျကျ မသိပေမယ့်လို့ တကယ်အကောင်အထည် ဖော်ကြမယ်ဟေ့ ဆိုရင်တော့ တခြား နည်းပညာထက်ပိုပြီး မြန်မြန် ဆန်ဆန် အကောင်အထည်ဖော် နိုင်မယ့် နည်းပညာ လို့ တော့ သိရတယ်..ဒါပေမယ့် အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ပဲ ဆက်သွယ်ရေးကောင်းဖို့ ဆိုရင် တာဝါတိုင်တွေ အများကြီးလိုပါတယ်..ရွှေပြည်တံခွန် ကုမ္ပဏီ ကတော့ တာဝါတိုင် အကြီးတွေအစား ပေါ့ပါးတဲ့ တာဝါတိုင် အသေးတွေ သုံးသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်..ဆက်သွယ်ရေး ပိုမို ကောင်းမွန် မယ် မကောင်းမွန် ဘူးဆိုတာတော့ မပြောပါဘူး..
ကဲ မေးခွန်းလေးတွေ ဖြေလိုက်ပါဦးမယ်...
၁ ။ ယခု ဆက်သွယ်ရေးက ချထားပေးမယ့် နှစ်သိန်းဝန်းကျင် ဖုန်းကို တန်ဖိုးနည်းဖုန်းလို့ သင်မြင်ပါသလား။
အရင်တုန်းထက် စာရက်တော့ အရမ်းကို သက်သာ သွားပါတယ်..သက်သာသွားတော့ လူအတော်အတန် သုံးလာနိုင်တာပေါ့...တန်ဖိုးနည်းတယ် လို့တော့ မမြင်ပါဘူး..
ကောင်းပါတယ်..အကျိုးသက်ရောက်မှုတကယ် ရှိမယ် ဆိုရင်တော့ ပိုပြီး ကောင်းတာပေါ့နော်...
အားလုံးစုပေါင်း ပြီး ပါဝင်တာ အားရစရာပါ.. ဒါက အားလုံးမျှော်လင့် လိုလားတယ်ဆိုတာ သက်သေပြတာပါ..
အော်...ကြိုဆိုတာပေါ့... ဆက်သွယ်ရေးပိုမို လွယ်ကူ လျင်မြန်လာမယ့် အခွင့်အရေးပါ..လိုင်းလေး ကောင်းမယ် ဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက် အလွန်ပေါ့...
ငါးထောင်တန် ဖုန်းဆိုပြီး ဖြစ်သလိုတော့ မဖြစ်စေချင်ပါဘူး. လူတွေ တစ်ချို့ လန့်နေသလိုမျိုး အလိမ်အညာတွေ လဲ မမိစေချင်ဘူး..ဈေးနှုန်းသက်သာတော့ တော်ရုံလူတန်းစား ဖုန်းကိုင်လာနိုင်မယ် ဒီကနေ တဆင့် ပိုမိုပြီး သက်သာ လာဦးမယ် ဆိုရင်တော့ အိမ်မက်တို့ မြန်မာ နိုင်ငံက လူတွေ နိုင်ငံခြားကား တွေ က လူတန်းစားစုံ ဖုန်းကိုင် နေတာကို ပါးစပ်ကြီး အဟောင်းသားနဲ့ ငေးနေဖို့ မလိုတော့ဘူးပေါ့..လိုင်း အရမ်းအရမ်းကြီး ကောင်းဖို့ မမျှော်လင့် ပေမယ့် အတော်အသင့် လေး ကောင်းတယ် ဆိုရင် ပဲ ဝမ်းသာစရာပါ..ဒါကြောင့် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုပါတယ် ခုနက ကြားလိုက်သလို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ ဆိုတာ မျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့ လို့လဲ ..................
( တကူးတက Tag လာတဲ့ မမ မဒမ်ကိုး နဲ့ သမီးစံ ကို အထူးကျေးဇူး တင်ပါကြောင်းး)...)
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 9:15 AM5comments:
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 9:56 AM4comments: